Yintoni iGoogle Drayivu | Iindaba zeGajethi
Ukuba sithetha ngeDropbox, ngokuqinisekileyo uyazi ukuba ndithetha ngale nto inkonzo yokugcina ilifu. I-Dropbox yenye yeenkonzo zokuqala zokugcina ilifu ezaye zaduma, hayi phakathi kwabasebenzisi kuphela, kodwa naphakathi kweenkampani, ngenxa yendlela esisinika ngayo ukuba yonke idatha yethu igcinwe efini kwaye ifumaneke kuso nasiphi na isixhobo.
Kodwa njengokuba iminyaka ihambile, iDropbox iwele ekusetyenzisweni, ikakhulu ngenxa yokumiselwa kwamaqonga amatsha okugcina ilifu ngabadlali abakhulu kolu shishino. Google, Microsoft, Apple, Mega zezinye zeenkampani ezenza ukuba olu hlobo lwenkonzo lufumaneke kuthi, uninzi lwazo lunamaxabiso aphantse afane. Kodwa, Yintoni iGoogle Drayivu?
1 Yintoni iGoogle Drayivu
2 Yintoni iGoogle Drayivu?
3 Uyisebenzisa kanjani iGoogle Drayivu
3.1 Sebenzisa iGoogle Drayivu kwikhompyuter yakho
3.2 Sebenzisa iGoogle Drayivu kwi-smartphone yakho
4 Iimpawu zeGoogle Drayivu
5 Indlela yokukhuphela iGoogle Drayivu
6 Ixabisa malini iGoogle Drayivu?
I-Google Drayivu yabona ukukhanya okokuqala ngo-2012 kwaye ukusukela ngoko indawo yokugcina ayibonisayo kunye nenani lemisebenzi ikhule ngokucacileyo ukuba ibe yenye yezona ndlela zintle ezikhoyo kwintengiso namhlanje, ukuba nje ungabasebenzisi benkonzo ye-imeyile ye-Gmail, kuba zombini iinkonzo zidityanisiwe, njengeefoto zikaGoogle.
Google Drayivu, njengoko igama lisitsho, yinkonzo yokugcina ilifu kaGoogle. Ukuba singabasebenzisi beGmail, uGoogle ngokuzenzekelayo wenza ukuba i-15 GB yendawo yasimahla ifumaneke kuthi ngeGoogle Drayivu, ke akufuneki sibhalisele le nkonzo ukuba sele sineakhawunti ye-Gmail. I-Google Drayivu iyafumaneka kuwo onke amaqonga afumanekayo kwintengiso, nokuba kukwidesktop okanye izixhobo eziphathwayo, ke ukufikelela kwidatha yethu efini akuyi kuba yingxaki nangaliphi na ixesha.
Yintoni iGoogle Drayivu?
IGoole Drayivu, njengoninzi lweenkonzo zokugcina ilifu, isivumela ukuba sihlale sithwala, endaweni yoko kwi-smartphone yethu, onke amaxwebhu esinokuba nawo kufuneka ubonisane okanye uhlele ngaxa lithileLogama nje sidibana ngaphandle kweofisi. Ukongeza, iGoogle Drayivu yenza uthotho lwezicelo ezikhoyo kuthi ukwenza amaxwebhu okubhaliweyo, iispredishithi kunye nemiboniso, nangona ifomathi iyisebenzisayo ayihambelani nezinye iinkqubo ezinje ngeOfisi yeMicrosoft kunye neWork yeApple, ke ayisoloko ilungile umbono wokusebenzisa olu hlobo lwesicelo ukwenza amaxwebhu ekufuneka siwafomathile ngokuchanekileyo ngaphambi kokuwabonisa.
Olunye uncedo olunikwa nguGoogle Drayivu, silifumana kwifayile ye- intsebenziswano, Sele ivumela abasebenzisi abaninzi ukuba basebenze kuxwebhu olunye kunye, inqaku elifanelekileyo kubasebenzisi abasebenza ngokubanzi kude kwaye kude neofisi.
Uyisebenzisa kanjani iGoogle Drayivu
Ukuba sineakhawunti ye-Gmail, sinakho, simahla, ngokupheleleyo i-15 GB yendawo yokugcina kwiGoogle Drayivu, indawo ekwabelwana ngayo ngeefoto zikaGoogle kwaye ikwafumaneka simahla kubo bonke abasebenzisi beGmail. Ukufikelela kwinkonzo yethu yokugcina ilifu kufuneka tyelela drive.google.com kwaye ucofe icandelo lam.
Ukuba ngaphambili besigcine uhlobo oluthile lomxholo, iya kuboniswa kule folda. Ngaphandle koko, akukho zifayile ziya kuboniswa. Kwikholamu yasekhohlo, sinokubona zombini indawo esihleli kuyo, njengaleyo sisenayo simahla.
Sebenzisa iGoogle Drayivu kwikhompyuter yakho
Ukuqala ukulayisha amaxwebhu kwilifu lethu, sineendlela ezininzi. Okokuqala kukusebenzisa iGoogle ukwenza ukuba kufumaneke kuthi kwiikhomputha. Xa ufaka olu setyenziso, luza kusibuza ukuba zeziphi izikhombisi-ndlela esifuna ukudityaniswa ngazo efini. Inketho yesibini kukurhuqa iifolda okanye amaxwebhu esifuna ukuwagcina ngokuthe ngqo kwisikhangeli kunye nethabhu yeGoogle Drayivu evulekileyo.
Sebenzisa iGoogle Drayivu kwi-smartphone yakho
Ukuba sifuna layisha ifayile kwinkonzo yokugcina kuGoogle Nge-smartphone yethu, kufuneka kuqala sifake usetyenziso. Okulandelayo, kufuneka sikhethe iifayile / ii-s, imifanekiso / iividiyo / iividiyo esifuna ukuzilayisha kwaye ucofe kwi-Share ukhetho, emva koko ukhethe iGoogle Drayivu kunye nefolda esifuna ukuyigcina.
Iimpawu zeGoogle Drayivu
Njengokuba iminyaka idlulile, inani lemisebenzi uGoogle ebeyidibanisa kuGoogle Drayivu inyusiwe, kude kube ngoku sinikezela inani elikhulu lazo kwaye phakathi kwazo sinokuqaqambisa:
Ukudalwa kwamaxwebhu okubhaliweyo.
Ukudalwa kweefom zokwenza uphando.
Uyilo lweetshathi kunye neetshati zokudibanisa ukongeza kamva kumaxwebhu ayenziwe ngaphambili
Umdibaniso neefoto zikaGoogle.
Igcina naluphi na uhlobo lwefayile, nokuba yeyiphi na ifomathi.
Ukukhangela okuSmart, njengoko inako ukubona izinto kwimifanekiso efundyiweyo kunye neetekisi.
Ukubonisana neenguqulelo zangaphambili zolu xwebhu.
I-Google Drayivu ikwasivumela ukuba sabelane ngeefayile nabanye abantu, iifayile esinokuthi sibeke kuzo iimvume ezahlukeneyo ukusuka ekufundeni ukuya ekuhleleni.
Indlela yokukhuphela iGoogle Drayivu
Njengoko benditshilo ngasentla, iGoogle Drayivu iyafumaneka kuwo onke amaqonga eselfowuni kunye nedesktop, nangona imisebenzi enikezelwa zizicelo zeselfowuni kunye nedesktop zahlukile. Ngelixa usetyenziso lwezixhobo eziphathwayo lusivumela ukuba singene kwaye sihlele, kuxhomekeke kwimeko leyo, amaxwebhu ethu, uguqulelo lwedesktop yile esiyifunayo ngamaxesha onke ukungqamanisa iifayile esifuna ukuba nazo.
La Usetyenziso lweDesktop kaGoogle Drayivu isetyenziselwa kuphela vumelanisa iifayile, ukusukela ukufikelela kumxholo ogciniweyo, singayenza ngewebhu, okanye ngokuthe ngqo ngokufikelela kwimikhombandlela apho sigcine khona iifayile ezihambelanayo ngalo lonke ixesha zihleliwe.
Google Drayivu - ukugcinwaMahala
Ixabisa malini iGoogle Drayivu?
Wonke umsebenzisi we-Gmail I-15 GB ayihlawulelwa yendawo oza kuyisebenzisa ngendlela ofuna ngayo, indawo ekwabelwana ngayo ngeeFoto zikaGoogle kwaye ikhutshiwe ukuba silayisha yonke imifanekiso kunye nevidiyo esizenzayo nesmartphone kwisisombululo sokuqala. Iifoto zikaGoogle zikwasinika ithuba lokugcina zonke iifoto zethu kunye neevidiyo simahla ngaphandle kokuthatha indawo yokugcina ukuba siyayamkela ukuba inkonzo icinezela imifanekiso kunye nevidiyo kunye nelahleko encinci yomgangatho.
Okwangoku, uGoogle Drive usinika, ukongeza kwi-15 GB yasimahla, ezinye iindlela ezintathu zokugcina ezinamaxabiso ahlukeneyo nokulungelelanisa zonke iimfuno zabasebenzisi babucala kunye neenkampani.
I-100 GB ye-1,99 euro ngenyanga.
I-1 TB (i-1000 GB) ye-9,99 euro ngenyanga
I-10 TB (i-10.000 GB) ye-99,99 euro ngenyanga
La maxabiso banokutshintsha, njengeendawo zokugcina, ke lolona khetho lufanelekileyo lokwazi Amaxabiso akhoyo kuGoogle Drayivu kukuya ngqo kwiwebhusayithi yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Yintoni iGoogle Drayivu